Mpanamboatra milina fanoratana - mpamatsy milina sy trano fanamboarana Sina
Milina 2m-6m hafainganam-pandeha ambony
Ny milina fanodinana haingam-pandeha ambony dia miaraka amin'ny mekanika tsy milamina, ny fikorohana, ny fikorontanana fanamafisana, ny fiasa tsirairay sy ny fanamafisana ny fanamafisana ny fanaraha-maso sy ny fitaovana fanaraha-maso. Ny fitsipika miasa dia toy izao manaraka izao: ny fitaovana vita amin'ny sarimihetsika metaly izay navotsotra avy amin'ny mekanika tsy vonona dia miditra amin'ny mekanika fanapahana amin'ny alàlan'ny fisolokiam-bokatra, ny fitsikerana ny fihenjanana, ny fanamafisana ny rafitra fanitsiana sy ny fanitsiana. Rehefa tapahana ny akora akora dia avotra indray ny mekanika miverimberina ...
2m-6m Masinina fitaterana haingam-pandeha ambony
Milina fanodinana haingam-pandeha ambony ahafahana mameno ny filan'ny tsena, namolavola izahay kaba. Ny milina fanodinana haingam-pandeha avo dia mety hanapaka ny fitaovana vita amin'ny fonosana lehibe 2 metatra 6 metatra, toy ny BOPP / CPP / OPP / PET / PE / PVC sy ny sisa. Ny milina dia misy ny motera Adopt Siemens servo ary ny Siemens mpanamboatra hetsika ho an'ny fahazoan-dalana mifehy ny fihenjanana vita amin'ny rafi-pitantanana azo antoka, rafi-piasana an-tserasera mety, ary afaka mifandray amin'ny Internet of Things ho an'ny fanaraha-maso lavitra Mifototra amin'ny fanaraha-maso lehibe ...
Masinina fiteteana fantsona
Milina fanodinana haingam-pandeha ambony ahafahana mameno ny filan'ny tsena, namolavola izahay kaba. Ny milina fanodinana haingam-pandeha avo dia mety hanapaka ny fitaovana vita amin'ny fonosana lehibe 2 metatra 6 metatra, toy ny BOPP / CPP / OPP / PET / PE / PVC sy ny sisa. Ny endri-masin-tsolika: ny motera Adopt Siemens servo sy ny mpiasan'ny hetsika Siemens mba hanomezana fanaraha-maso hentitra ny rafitra Optimized, rafi-piasana an-tserasera mety, ary afaka mifandray amin'ny Internet of Things ho an'ny fanaraha-maso lavitra miankina amin'ny adihevitra lehibe ...